Sanju – Page 9 – Filimside.net
Sanju Hindiya waa gil gilay maalinta kowaad kani waa mashruuc BOI gacan u taagtay
June 30, 2018 Zakarie Abdi
Filimka Sanju ayaa ganacsi waali ah sameeyay maalintiisa kowaad wuxuuna noqday filimka 6-aad ee ugu bilaabashada wanaagsan ebid iyo filimka sedexaad ee ugu bilaabashada wanaagsan ee aan maalin fasax ah la dawaanin. Sida shabakada Boxoffice […]
Rishi Kapoor oo kaga mahad celiyay Salman, Akshay, Ajay iyo Saif inay filimka Sanju xili hore xayeysiin u sameeyeen!
Ranbir Kapoor Hindiya isaga ayaa heesto waxaana la isku raacay in xidigaan atooraha ugu wanaagsan sanadkan ku qaadan doono madaama filimkiisa Sanju sida uu kaga run sheegay nolosha Sanja Dutt qof walbo la ama kaagay. […]
Aamir Khan oo daawaday filimka Sanju iyo amaanta ii kala dul dhacay Ranbir Kapoor & Vicky Kaushal
Mr. Perfectionist Aamir Khan ayaa daawaday filimka weyn ee hadal heynta Hindiya heesto Sanju oo maanta tiyaatarada la saaray hogaamiyana uu ka yahay Ranbir Kapoor. Sanju ayaa looga hadlaa nolosha Superstar Sanjay Dutt waxaana xusid […]
Qiyaasta xili hore Sanju oo ku socdo inuu maalinta kowaad 30 Crore ka talaabsado Ranbir waa yimid!
Inaba caadi ma ahan filimka Sanju ayaa Hindiya oo dhan qabsaday kuna qasbaday dadka tiyaatarada inay ugu soo daawasho tagaan in maalin fasax ay tahay oo kale inkastoo maanta maalin shaqo tahay. Ranbir Kapoor filimkiisa […]
Sanjay Dutt Oo Ranbir Kapoor Shaashada La Wadaagayo Muuqaal Marti Ahna Kuleh Filmka Sanju!!
June 29, 2018 Ali Aadan
Ma ogtahay Sanjay Dutt inuu kasoo muuqanaayo filmka Sanju ee noloshiisa looga hadlaayo waliba muuqaal marti ah ayuu ku leeyahay oo uu shaashada la wadaagayo Ranbir Kapoor. Ugu dambeyn maanta ayaa tiyaatarada la saaray filmkii […]
Ugu dambeyntii waxaa tiyaatarada la saaray filimka Sanju ee uu mudo labo sano ah Ranbir Kapoor ku hawl lanaa sidoo kalena Director Rajkumar Hirani afar sano uu mashruucaan ku mashquulsanaa. Filimka Sanju waxaa looga hadlaa […]
Morning Update: Filimka Sanju oo si heer sare ah ku furmay waa filimka 3-aad ugu bilaabashada wanaagsan 2018
Ranbir Kapoor filimkiisa weyn subaxaan ayaa gudaha Hindiya la saaray wuxuuna ku furmay 45% ilaa 50% inta u dhaxeyso waana filimka sedexaad ee ugu bilaabshada wanaagsan 2018 aflaanta Hindiga ah waxaana ka bilaabasho wanaagsan Baaghi 2 iyo Race 3 […]
Sanju oo noqday filimka 5-aad ee lacagaha ugu badan tikit-ka hormariska la iibsado laga helo!
Ranbir Kapoor filimkiisa Sanju ayaa noqday filimka 5-aad ee lacagaha ugu badan laga helo tikit-ka hormariska loo iibsado ka hor inta aan tiyaatarada la saarin sida shabakada Boxoffice India cadeesay. Sanju wuxuu noqday filimka 5-aad […]
La tartan Filimside Sadaal ka bixi filimka Sanju maalinta 1-aad, 3-maalmood ee ugu horeyso, todobaadka 1-aad & cimri ahaantiisa ganacsiga uu sameyn karo
June 28, 2018 Zakarie Abdi
Ranbir Kapoor wuu soo laabtay wuxuuna diyaar u yahay Boxoffice-ka inuu gil gilo asigoo wato filimka hadal heyntiisa cirka mareyso Sanju oo laga matalay nolosha Superstar Sanjay Dutt. Director: Rajkumar Hirani Producers: Rajkumar Hirani, Vidhu Vinod Chopra […]
Ranbir Kapoor, Neetu Kapoor, Manisha Koirala Iyo Xidigo Kale Oo Lagu Casuumay Daawashada Sanju (+Sawiro)
June 28, 2018 Ali Aadan
Sanju waxaa tiyaatarada la saari doona maalinta barita ah (29 June) oo jimco ku beegan waana mashruuc looga hadlaayo halyeey Bollywood Sanjay Dutt noloshiisa. Kooxda Sanju ayaa casuumaad u fidiyeen qaar kamid ah dadka akdhow […]